कोरोनाको लागि गृह मन्त्रालयले सुरु गर्यो 'एकीकृत सूचना प्रणाली तथा क्वारेन्टाइन अनुगमन प्रणाली'
कोभिड–१९ को बारेमा आधिकारिक सूचना एकै ठाउँबाट जानकारी लिने र मोबाइल एप्समार्फत क्वारेन्टाइन अनुगमन गर्ने सूचना प्रणाली गृह मन्त्रालयले सोमबारदेखि शुरु गरेको छ । मन्त्रालयले क्वारेन्टाइनमा बसेका व्य...
क्वारेन्टाइनमा एप्सबाट निगरानी
काठमाडौं, २४ चैत्र । कोभिड–१९ को यथार्थ जानकारीबारे तपाईं अलमलमा परिरहनुभएको छ? सामाजिक सञ्जालमा आउने फरक–फरक सूचनाले हैरानी खेपिरहनुभएको पो छ कि? अब ढुक्क हुनुहोस्। तपाई त्यो हैरानीबाट मुक्त हुँदै...
काठमाडौं- कोभिड–१९ को यथार्थ जानकारीबारे तपाईं अलमलमा परिरहनुभएको छ ? सामाजिक सञ्जालमा आउने फरक–फरक सूचनाले हैरानी खेपिरहनुभएको पो छ कि ? अब ढुक्क हुनुहोस् । तपाई त्यो हैरानीबाट मुक्त हुँदै हुनुहुन...
क्‍वारेन्टाइनमा बसेका कोही बाहिर निस्क्यो! 'कोबड्डी'ले खबर गर्छ प्रहरीलाई
कोभिड-१९ को यथार्थ जानकारीबारे तपाईं अलमलमा परिरहनुभएको ? सामाजिक सञ्जालमा आउने फरक-फरक सूचनाले हैरानी खेपिरहनुभएको पो छ कि? अब ढुक्क हुनुहोस्। तपाईं त्यो हैरानीबाट मुक्त हुँदै हुनुहुन्छ। आजदेखि को...
कोभिड–१९ को यथार्थ जानकारीबारे तपाईं अलमलमा परिरहनुभएको छ ? सामाजिक सञ्जालमा आउने फरक–फरक सूचनाले हैरानी खेपिरहनुभएको पो छ कि ? अब ढुक्क हुनुहोस् । तपाई त्यो हैरानीबाट मुक्त हुँदै हुनुहुन्छ । आजदेख...
कोभिड–१९ का सूचना एउटै वेब साइटबाट, क्वारेन्टाइनको निगरानी एप्सबाट
काठमाडौँ – कोभिड–१९ को यथार्थ जानकारीबारे तपाईं अलमलमा परिरहनुभएको छ ? सामाजिक सञ्जालमा आउने फरक–फरक सूचनाले हैरानी खेपिरहनुभएको पो छ कि ? अब ढुक्क हुनुहोस् । तपाई त्यो हैरानीबाट मुक्त हुँदै हुनुह...
अब कोरोनाको सूचना एउटै वेबबाट, क्वारेन्टाइनको निगरानी एप्सबाट
काठमाडौं, २४ चैत । कोभिड–१९ को यथार्थ जानकारीबारे तपाईं अलमलमा परिरहनु भएको छ ? सामाजिक सञ्जालमा आउने फरक–फरक सूचनाले हैरानी खेपिरहनु भएको पो छ कि ? अब ढुक्क हुनुहोस् । तपाई त्यो हैरानीबाट मुक्त ह...
नारायण ढुङ्गाना/काठमाडाैं, २४ चैत । कोभिड–१९ को यथार्थ जानकारीबारे तपाईं अलमलमा परिरहनुभएको छ ? सामाजिक सञ्जालमा आउने फरक–फरक सूचनाले हैरानी खेपिरहनुभएको पो छ कि ? अब ढुक्क हुनुहोस् । तपाई त्यो हैर...
कोभिड–१९ का सूचना एउटै वेबबाट : क्वारेन्टाइनको निगरानी 'एप'बाट
काठमाडौँ । कोभिड–१९ को यथार्थ जानकारीबारे तपाईं अलमलमा परिरहनुभएको छ ? सामाजिक सञ्जालमा आउने फरक–फरक सूचनाले हैरानी खेपिरहनुभएको पो छ कि ? अब ढुक्क हुनुहोस् । तपाई त्यो हैरानीबाट मुक्त हुँदै हुनुह...
अब क्वारेन्टाइनको निगरानी एप्सबाट
तस्बिर : प्रदीपराज वन्त काठमाडौं, चैत २४ । कोभिड–१९ को यथार्थ जानकारीबारे तपाईं अलमलमा परिरहनुभएको छ ? सामाजिक सञ्जालमा आउने फरक–फरक सूचनाले हैरानी खेपिरहनुभएको पो छ कि ? अब ढुक्क हुनुहोस् । तपाई ...
कोभिड-१९ का सूचना एउटै वेबबाट, क्‍वारेन्टाइनको निगरानी एप्सबाट
काठमाडाैं। कोभिड–१९ को यथार्थ जानकारीबारे तपाईं अलमलमा परिरहनुभएको छ ? सामाजिक सञ्जालमा आउने फरक–फरक सूचनाले हैरानी खेपिरहनुभएको पो छ कि ? अब ढुक्क हुनुहोस्। तपाईं त्यो हैरानीबाट मुक्त हुँदै हुनुह...